Fitsipipitondran'ny mpikambana MKMB (nohavaozina Okt. 2013)
Accueil du site M.K.M.B. Règlement interne
Fitsipipitondran’ny mpikambana MKMB (nohavaozina Okt. 2013)
Article publié le mercredi 27 novembre 2013.
SATA MIFEHY (FITSIPIPITONDRANA ) NY MPIARAMIVAVAKA KRISTIANA MALAGASY ATY BENELUX (MKMB).
Miorina eto amin’ny "Eglise Protetante Bruxelles-Botanique" (EPUB) ny sampana iray mitondra ny anarana hoe "MPIARA-MIVAVAKA KRISTIANA MALAGASY ETO BENELUX"(M.K.M.B.). Fiombonan’ny kristiana Protestanta Malagasy na hafa Firenena nifototra tamin’ny fitaizam-panahin’ny Fiangonan’ny Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) izy ity(Fiangonana Réformée) ary manana fifandraisana manokana amin’ny foibe FJKM. Nanomboka tamin’ny taona 2004 dia Masoivoho ofisialin’ny FJKM eo anatrehan’ny Eglise protestante Unie de Belgique (EPUB) sy izay Fiangonana Protestanta Belza manana na mitady fifandraisana amin’ny FJKM ny MKMB . Fehiny : Fiombonan’ny MALAGASY na hafa Firenena mino an’i KRISTY hany TOMPO sy MPAMONJY araka ny SORATRA MASINA ary manaiky an’ANDRIAMANITRA TOKANA nahary sy miahy izao rehetra izao. Amin’ny maha-zanaky ny » Réforme » ny MKMB (satria sampana iray ato amin’ny Eglise protestante de Bruxelles-Botanique izy sady zanaky ny FJKM ) dia : Ny litorjia FJKM (izay fiangonana reforméé) no ampiasain’ny MKMB amin’ny fanompoampivavahana sy amin’ny fankalazana ny sakramentan’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo karakarainy . Amin’ny teny Malagasy no anatanterahina izany ary Fihirana FFPM no ampiasainy amin’izany . Ny Baiboly Malagasy Protestanta sy DIEM no ampiasainy .
Mitory an’i KRISTY sy ny FITIAVANY amin’ny MALAGASY sy ny olombelona rehetra. Araka izany, ny fampianarana ekeny sy ijoroany dia izay voalazan’ny BAIBOLY ary hazavain’ny FANAHY MASINA. JESOA KRISTY izay inoany sy ekeny fa Loha sy Tompon’ny Fiangonana ary vato fehizoro irafetany (Efes.II : 20 - 21) no fototra ijoroany.
Fitambaran’ny mpikambana mahefa (membres votants) sy mpikambana mpanohana (membres sympathisants) no antsoina hoe mpikambana.
Ny mpikambana dia Kristiana malagasy na hafa fiaviana, mipetraka eto BENELUX (Belgique - Nedeerland - Luxembourg) na firenena hafa mifanila sisintany amin’I Benelux ka manome ny adiresiny amin’ny mpitantsoratra ary manaiky ny anoratana ny anarany sy (na) ny ankohonany amin’ny boky firaiketan’ny Mpiaramivavavka (MKMB) rehefa mahalala ka nanaiky antsitrapo ny fitsipipitondrana sy ny foto-pinoana ijoron’ny MKMB (and.1 sy 2).
Tsy maintsy havaozina isaky ny roa taona, mialoha ny fanavaozana (fifidianana) ny komity mpitantana , ny lisitry ny mpikambana (mahefa sy mpanohana) . Mandritra ny efa-bolana mialoha ny fotoana fanavaozana komity no anaovana izany .Ny fanentanana amin’ny fanavaozana ho mpikambana dia atao amin’ny alalan’ny mailaka isam-pianakaviana na isan’olona , antso amin’ny filazan-draharahampiangonana - taratasy alefa paositra - filazana an-gazety. Tapitra ny fanavaozana ho mpikambana rehefa tonga ny fanavaozana komity ary manankery mandritra ny roa taona ny lisitry ny mpikambana (mahefa sy mpanohana) . Ny mpitantsoratra no tompon’antoka amin’ny fitehirizana ny boky mirakitra ny lisitry ( anarana ,adiresy , ankohonana) ny mpikambana rehetra (mahefa na mpanohana) ary manana dika mitovy ihany koa ny mpandrindra ahazoany manatanteraka ny asany . Raisina ho toy ny nametra-pialana avy hatrany ireo izay tsy nanavao ny firotsahany ho mpikambana tao anatin’ny roa taona . Ny mpikambana mahefa tsy nahatanteraka ny adidiny tao anatin’ny roa taona ihany koa dia raisina ho toy ny nametra-pialana. Araka izany dia tsy azo tanterahina amin’ny nametra-pialana ny fitsipika mifahy ny MKMB momba ny fehim-pihavanana (and.11) .
Ny mpikambana ato amin’ny MKMB dia irina mba ho mambra amina Fiangonana Protestanta iray eto Benelux ka eken’ny fanjakana Foibe (Belza na Holanda na GD Luxembourg) ny fijoron’izany fiangonana misy azy izany. Raisina eo am-panoratana ny anarana ny adiresin’ny fiangonana misy azy eto Benelux raha hipetraka mihoatra ny taona iray izy.
4.ANDRAIKITRY NY MPIKAMBANA
Mandray anjara amin’ny asa tandrify azy, arakaraka ny talentany ; an-tsitrapo ary malalaka, araka ny soa ho an’ny rehetra.
Manaja sy mankato ny fitsipiky ny fiombonana ary manaiky izany an-tsitrapo eo am-pirotsahana ho mambra.
Miezaka manaraka ny fampianarana ara-panahy atolotry ny M.K.M.B. sy ny fiangonana misy azy eto Benelux.
Fivoriana iantsoana ny mpikambana rehetra (mahefa sy mpanohana) no antsoina hoe Fivoriambe. Indroa isan-taona no fotoana fivoriambe ara-dalàna, iadian-kevitra sy angalana fanapahankevitra. Iray volana mialoha no iantsoana ny Fivoriambe, an-tsoratra ary antsoin’ny fivorian’ny komity mpitantana ny MKMB. Azon’ny komity atao ny mampiantso Fivoriambe vonjimaika raha misy ilana izany. Ekena ho ara-dalàna ny Fivoriambe ara-potoana rehefa tontosa ny fiantsoana nataon’ny komity (iray volana mialoha). Tsy misy isa tratrarina amin’izany. Ny fanapahana rehetra dia ekena ho lany rehefa mahazo isa mitovy amin’ny atsasaky ny mpanapakevitra tonga ka manatrika fivoriana , izany hoe ny mpikambana mahefa (membres votants).Ny mpikambana mpanampy dia mandray anjara feno amin’ny fanolorana sosokevitra sy fifanakalozankevitra fa tsy manan-jo hifidy na hanapa-kevitra amin’ny fivoriambe (ara-dàlana na vonjimaika).
6.ANDRAIKITRY NY FIVORIAMBE
Fandinihina ny soso-kevitra avy amin’ny besinimaro arahina adihevitra sy fandaniana raha misy ilàna izany. Marihina tsara etoana fa ny soso-kevitra rehetra enti-mampandroso ny MKMB ka tiana aroso amina fivoriambe (voalohany na faharoa na fivoriambe tsy ara-potoana ) dia tsy maintsy mandalo ary voadinika amin’ny fivorian’ny komity mialoha (iray volana mialoha fara-faharatsiny) vao azo aroso amin’ny fandaharan’ny fivoriambe.
Fandinihana ary fandaniana ny tatitra ataon’ny mpandrindra sy ny komity .
Fandaniana ny tetibolan’ny MKMB isan-taona ;fandaniana ny tetik’asa isan-taona ; fifidianana komity ; fananganana vaomiera. Ny fandaniana ny soso-kevitra mipoitra rehetra sy fandaniana ny tatitra isan-karazany (teti-bola, sahan’asa, fanitsiana teti-bola, ets...) dia ny mpikambana mahefa (membres votants) no hany afaka mandray anjara. Toy izany koa, ny fifidianana ny komity mpitantana ny MKMB, na fifidianana mpandinibola na izay mahakasika ny fitantanana ny MKMB rehetra, dia ny mpikambana mahefa no hany afaka mandray anjara . Mahazo mamosa-kevitra malalaka kosa ny mpikambana mpanohana tonga manatrika ny fivoriambe.
Ny komity no mpitantana sy mpandrindra ary mpanentana ny M.K.M.B.
Telo farafahakeliny no isany.
Ny komity, tarihin’ny mpandrindra, no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fampandehanana ny raharahan’ny MKMB rehetra eo anatrehan’ny fivoriambe. Izy ihany koa no tompon’andraikitra eo anatrehan’ny Fiangonana Protestanta Bruxelles-Botanique (paroasy sy ny consistoire) sy ny Birao Foibe FJKM ary izay fiangonana na fikambanana (aty Eropa na any an-tanindrazana) manana fifandraisana amin’ny MKMB. Ny komity ihany koa, tarihin’ny mpandrindra, no tompon’andraikitra eo anatrehan’ny Masoivohon’ny Firenena Malagasy (Ambasady) aty Benelux. Manana ny fitsipipitondrany manokana ny komity izay mamaritra ny andraikiny sy ny faharetany ,efa lanieran’ny fivoriambe.
Ny vaomiera no rafitra entina manantanteraka sy mitsinjara ny asa sahanina eto amin’ny M.K.M.B. Tsy voafetra ny isan’ny vaomiera fa arakaraka ny zava-misy ary eken’ny fivorian’ny komity ny fisiany. Olona telo farafaha-keliny no mambra amina vaomiera iray, mahatsapa fa manana talenta manokana amin’izany, ankoatry ny komity mpikambana (tsy voafetra ny isan’ny komity ) ao amin’ilay vaomiera. Ny tompon’andraikitry ny vaomiera tsirairay no mampita ny asany amin’ny komity . Azo atao tsara no mirotsaka amina vaomiera maromaro. Manana ny fivoriany manokana ny vaomiera misy , ifanarahana mialoha amin’ny mpandrindra izany mba tsy ifanitsahan’ny fotoana.
9.NY HOENTI-MANANA. (Fidiram-bola hanatanterahina ny asan’ny MKMB).
Rakitra amin’ny fanompoampivavahana ; raki-boady ; vokatra na ezaka ;fanomezana antsitrapo (legs) ; fivarotana diary ; sakafompiraisana ; horonam-peo na horonan-tsary ; fanisan’andro, Biblioteka, teatra, sarimihetsika ; rindran-kira ; fisotroan-dite ; vatan-drakitra maharitra ho amin’ny fifanampiana. Ny mpikambana mahefa (votants) dia manana adidy manokana 20 (vingt) euros ary efaina isan-taona . Ny mpikambana mahefa tsy mahatanteraka izany mandritra ny roa taona misesy dia midika ho nametra-pialana . Ny mpikambana mpanohana kosa dia manao ny adidiny araka ny nahim-pony .
Fitoriana an’i KRISTY sy ny FITIAVANY amin’ny MALAGASY amin’ny alalan’ny : •Fanantanterahana ny fehim-pihavanana (voina, hafaliana, aretina, fanampiana hafa noho ny fahasahiranana : fianakavianana mpianatra) •Fitorianteny •Famangiana isan-tokantrano •Rindran-kira ara-pilazantsara •Fampisehoana mivelatra •Fiarahan’ny daholobe misakafo •Fifanankalozan-kevitra. •Fianarana ny TENIN’ANDRIAMANITRA •Fiarahana manao fanatanjahantena •Fiaraha-mivavaka na fiombonambavaka .Fampianarana ny teny sy fomban-drazana malagasy. •Lasy,fiaraha-mialasasatra •Fampahalalana ny tanindrazana amin’ny alalan’ny gazety, hira , mozika,valan-dresaka. . Fananganana Biblioteka Malagasy. •Fanampiana na fandraisana anjara amin’ny asa sahanin’ny Eglise Botanique na Fiangonana ara-dalàna hafa aty Benelux. • Fanampiana na fandraisana anjara amin’ny asa sahan’ny fiangonana kristianina na fikambanana hafa any an-tanindrazana . Tanterahin’ny MKMB sy ny vaomiera mifanadrify amin’ny asa ireny sahan’asa ireny rehefa nandalo tao amin’ny fivorian’ny komity ary neken’ny Fivoriambe.
Voafaritra amin’ireto ny momba ny fifaliana : teraka, fisoratam-panambadiana, nahazo sakramenta (batisa, fandraisana), fodiana tanteraka na fifindrana firenena. Voakasika mivantana amin’izany ny tenan’ny mpikambana (mahefa sy mpanohana), ny vadiny, ny zanany na ny eo ambany fiadidiany eto Benelux. Vangiana na tolorana fanomezana mitentina 20 Euros ilay olona na ilay fianakaviana rehefa nampilaza an-tsoratra (taratasy na mailaka) ary avantana amin’ny mpandrindra na ny mpitantsoratry ny MKMB, fara-fahatarany iray volana aorian’ny datin’ilay hafaliana. Raha maromaro no nahazo fahasoavana (sakramenta) ao amina tokantrano iray dia samy mahazo fanomezana na fahatsiarovana tsirairay izy. Ny famangiana dia tanterahina amin’ny andro iaraha-mivavaka isam-bolana na amin’izay maha-mety azy ka ifanarahan’ny komity sy ilay vangiana.
Fahoriana midona amin’ny mpikambana mahefa na mpanohana :Tsy voatery mahazo fampandrenesana ara-dalàna vao mamangy fahoriana ny M.K.M.B. fa rehefa naheno ny iray amin’ny komity ka voamariny dia afa-miroso raha manaiky ny hamangiana azy ilay fianakaviana na ilay olona mpikambana (mahefa na mpanohana). Voafaritra ho toy izao ny manjo : maty ray na reny (niteraka na nitaiza), maty vady, maty anaka, maty iray tampo (iray tampo amin’ny mpikambana na amin’ ny vadiny), maty tena.
1-Ivelan’i BENELUX .
Raha any ivelan’i BENELUX ny razana dia vangiana 50 Euros (cinquante Euros) ny manamanjo eto BENELUX ka mpikambana ( Mahefa na Mpanohana). Raha mpiaramonina eto BENELUX ilay manamanjo, nefa tsy mpikambana ato amin’ny MKMB dia vangiana 20 Euros (vingt Euros), ka naharaisan’ny komity fampilazana an-tsoratra(taratasy na mailaka) - ary manaiky hovangiana .
Raha eto an-toerana (BENELUX) kosa ny razana dia vangiana 50 (cinquante Euros) ilay manamanjo ary anaovana ezaka manokana enti-manampy ilay fianakavian’ny mpikambana azom-boina . Voafaritra toy izao izany Ezaka hefain’ny MKMB izany :
a- 1000 Euros (Mille Euros) Euros raha Mpikambana nahavita adidy ara-dàlana fara-fahakeliny taona iray nandritra ny taona roa farany diavina . Marihina tsara fa raha tsy nanao adidy nandritra ny roa taona mifanesy ilay Mpikambana Mahefa (votant) amin’ny taona isin’ny fahoriana dia efa nanala tena izy : noho izany tsy voakasik’izao andalana izao . Hamarinin’ny Mpandrindra, ny Mpitahirivola sy ny Mpitantsoratra miaraka, araka izany , ny bokim-piangonana mirakitra ny fanaovana adidy alohan’ny anaovana ny Ezaka manokana ary ampahafantarina ny komity . Anterina fa voafaritra toy izao ny manjo : maty Ray na Reny (niteraka na nitaiza), maty vady, maty anaka , maty iray tampo, maty tena.
b-100 Euros (cent Euros) raha Mpikambana Mpanohana na Mahefa ka tsy nahatanteraka ny adidiny tao anatin’ny roa taona diavina itrangan’ilay manjo.
d-50 Euros (cent Euros) raha mpiaramonina eto BENELUX ka nahazoan’ny komity fampilazana an-tsoratra (taratasy na mailaka) ary manaiky hovangiana .
Ny famangiana an-karatsiana dia azo tanterahina amin’ny andro iaraha-mivavaka isam-bolana raha mifanindry na mifanakaiky amin’izany ilay vanim-potoana. Na koa : ny komity sy izay tratra antso no mamangy, arakaraka ny toerana sy ny vanim-potoana itrangan’ilay zava-miseho. Ny fotoam-pamangiana dia tsy maintsy asiana fanompoampivavahana fampaherezana sy fitoriana ny tenin’Andriamanitra ho an’ny velona , eo ambany fitarihan’ny komity sy ny vaomieran’ny Aimpanahy.
3-Seho hafa . Raha mahazo filazana manjo avy amina Fiangonana Malagasy rahavavy aty ivelan’i Madagasikara na avy amin’ny Birao Foibe FJKM , na koa avy amin’ireo fikambanana any an-tanindrazana ampian’ny MKMB , dia anaovan’ny komity taratasy fampiononana sy fampaherezana ary vangiana 50 Euros (cinquante Euros) ka ampitaina araka izay maha mety azy amin’ny azom-boina .
Raha misy mpikambana (mahefa na mpanohana) miditra hopitaly na marary mafy an-trano ,ka mampilaza amin’ny M.K.M.B. (amin’ny alalan’ny komity - am-bava) dia anaovana solo-tsiramamy 20 Euros(vingt Euros). Ny famangiana dia tanterahin’ny solontenan’ny M.K.M.B. tratra antso amin’ny fotoana mety amin’ilay marary.
“Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kohanina isan’andro, ka misy aminareo manao aminy hoe : mandehana amin’ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny hoan’ny tenany, inona moa no soa azo amin’izany ?” (Jakoba 1 :14-16) . Ny MKMB, amin’ny maha fiombonan’ny mpianakavy kristiana azy dia miezaka manatanteraka ilay teny filamatra manao hoe : “velona hoan’ny hafa” ireo mpikambana ao aminy (mahefa sy mpanohana). Miompana amin’ny fifampitokisana sy amin’ny fitazonana tsiambaratelo ny fanatanterahana ny asa amin’izany. Isan-taona dia tsy maintsy voafaritra ao amin’ny tetibolan’ny MKMB ny mahakasika izany fifanampiana izany. Voafaritra tahaka izao ny mahakasika izany “fifanampiana” izany : tsy fahampiana ara-bola ka mila vonjy maika noho ny adim-piainana . Mipetraka manontolo amin’ny fahendren’ny komity ny famaritana izany filam-bonjy izany , arakaraka ny fisehony isambatan’olona (cas par cas) mangataka fa tsy raisina ankapobeny . Ny mpikambana (mahefa na mpanohana), Malagasy na hafa fihaviana no ampiana - ka naharaisan’ny komity antso na fangatahana mazava. Tsindriana etoana fa “tsiambaratelo” miankina amin’ny fifampitokisana kristiana no fiasan’ny komity amin’ny fandraisana fanapahankevitra rehetra mahakasika ny fifanampiana. Sary roa no isehon’ny fantaterahana ny “fifanampiana” : a- Fanampiana . Ny komity no mamakafaka ny anton’ny fangatahana fifanampiana sy mamaritra ny sandan’ny fanampiana . Tsy mihoatra ny 100 Euros (cent euros) ny fanampiana atolotry ny MKMB : tsy onerana fa omena . b-Fanoroana lalana (torohevitra) :manoro lalana an’ilay ampiana na mampita izany amin’ny Diakonian’ny fiangonana misy azy eto Benelux na fikambanana mpanao asa soa hafa heverin’ny komity fa afaka mamaly ny antson’ilay olona mila vonjy . Manampy sy mitantana ilay ampiana araka izay tratra amin’izany fanoroana lalana izany ny komity. Ankapobeny . Na dia mipetraka amin’ny fahendren’ny komity aza ny fandraisana fanapahankevitra mikasika ny fifanampiana dia misy ireto “vala” ireto tsy maintsy arahina :
Tsy voakasika ary tsy azo omena fanampiana (na ampiana) ny : fandehanana maka rivotra - mahakasika fahoriana ankoatry ny voalaza ao amin’ny fehimpihavanana (jereo laharana 11) - ny hafaliana na fanaovana lanonana - ny fanorenana tokantrano - ny fiantohana amin’ny fanofana trano ipetrahana na anaovana lanonana - ny fandehanana fianarana asa (stage na voyage d’études).
Tsy azon’ny MKMB atao, amin’ny alalan’ny komity , ny manampy olona na fianakaviana iray mihoatra ny indroa ao anatin’ny taom-pianarana iray raha tsy misy antony tsy azo anoharana ka hitan’ny komity fa mitombina ny fanohanana ilay olona na fianakaviana. Sary manokana : voina mahazo ny firenena na fiangonana mpiaramiasa (any an-tanindrazana na aty ivelan’ny tanindrazana). Ankoatry ny voalaza rehetra etsy ambony dia mandray adidy tandrify azy ny MKMB eo anatrehan’ny voina (nanahary na hafa) manjo ny firenena Malagasy na fiangonana rahavavy (kere, safodrano na tondradrano, valala, hain-tany , hain-trano ets...) Amin’izany dia anaovana rakitra manokana ilay antso , miampy 50 Euros (cinquante) miala amin’ny kitapon’ny fiarahamivavaka . Ny komity no mamaritra sy manaramaso ny andefasana na anolorana ny fanampiana, ary tsy voatery avantana amin’ny fitondram-panjakana ( ministera) .
An-tsoratra ary avantana amin’ny mpitantsoratra no anaovana ny fialana. Azo atao koa anefa ny manao fametraham-pialana mivantana (am-bava) amin’ny mpandrindra atrehan’ny komity iray na roa fara-fahakeliny. Ireo mpiofana na mpianatra mandalo fotoana fohy (enim-bolana, taona iray na roa...) ary nirotsaka ho mpikambana nandritra ny fotoana nipetrahany teto Benelux , rehefa ataon’ny MKMB veloma dia raisina ho toy ny mpikambana nametra-pialana avy hatrany.
Raha misy faharavan’ny M.K.M.B. dia atolotra ny Eglise Protestante Bruxelles- Botanique (consistoire) ny momba ny M.K.M.B. rehetra (fananana, antotan-taratasy). Azo ovana na ampiana ity fitsipika ity raha misy mangataka izany ka tsapan’ny komity fa hita ny mahamety azy. Ny fivoriambe no tompon-teny farany amin’ny fanovana ny fitsipika anatiny.
Rafitra enti-mitsinjara sy manatanteraka ny asa eto amin’ny MKMB no antony ananganana ny vaomiera . Arakaraka ny fiainan’ny fiaraha-mivavaka (MKMB) no anangananan’ny fivoriambe (rehefa nandalo tao amin’ny komity) ny vaomiera . Kristiana telo farafaha-keliny no mpikambana amina vaomiera iray . Ary tsy maintsy misy mambra ao amin’ny komity (iray farafahakeliny) , mpikambana amina vaomiera iray. Azo atao tsara ny mirotsaka amina vaomiera maromaro. Manana ny fivoriany manokana ny vaomiera iray : mamolavola ny tetibolany isan-taona arakaraka ny drafitr’asa faritany . Atolony ny komity ny drafitr’asa sy ny tetibolan’ny vaomiera tsirairay ary atambatra amin’ny tetibolan’ny MKMB atolotra holanian’ny fivoriambe isaky ny taona. Kendrena anefa izany mba tsy hifanitsaka amin’ny fivorian’ny komity na fivorian’ny vaomiera sasany. Noho izany dia tsy maintsy ampahafantarina amin’ny fivorian’ny komity akaiky indrindra (fotoana) ny fandaharampotoan’ny vaomiera rehetra. Tsy azon’ny vaomiera mijoro ny manao fidiram-bola ho azy manokana na manendry mpitahiry vola ho azy manokana. Tsy misy afa-tsy iray ny mpitahirivola ato amin’ny MKMB. Izany na atao dia ialana amin’ny fitsitokotokoana sy isorohana amin’ny fifampiandaniana. Ny tatitry ny vaomiera dia tsy maintsy entina amin’ny fivorian’ny komity alohan’ny anehoana izany amin’ny fivoriamben’ny MKMB ara-dalàna). Manao tatitra indray mandeha isan-taona eo anatrehan’ny fivoriambe fara-faharatsiny ny vaomiera mijoro rehetra. Ireo vaomiera mijoro ankehitriny (fenoina hatrany isaky ny misy fijoroana vaomiera ity andalana ity ) :
Aim-panahy : tompon’andraikitra amin’ny fiombonambavaka isan-kerinandro, famangiana sy fampaherezana ato amin’ny amin’ny MKMB. Tompon’andraikitra ihany koa amin’ny fandraisana ny vaovao . na ny vao tonga .
Agape : tompon’andraikitra amin’ny fiarahana mikorana (sakafo iombonana, ets..) ato amin’ny MKMB. Tompon’andraikitra ihany koa amin’ny fandraisam-bahiny.
Serasera : tompon’andraikitra amin’ny famoahana ny gazety “Finoana sy Fahazavana” sy ny “site”-ny MKMB (www.mkmb.be ). Tompon’andraikitra amin’ny fampitam-baovao ato amin’ny MKMB.
Fifandraisana : vaomiera misahana ny fifandraisana amin’ny fiangonana Malagasy aty Eropa na eto Benelux , na koa fiangonana Eropeana . Miandraikitra ny Ekiomenisma .Tompon’andraikitra amin’ny fifandraisana amin’ny foibe FJKM na EPUB .
Vakomanitra : Tompon’andraikitra amin’ny fampandehanana ny biblioteka malagasy natsangan’ny MKMB . Tompon’andraikitra amin’ny fampitana sy fanandratana ny maha malagasy (fampianarana Teny malagasy , hira malagasy ...).
Fanentanana sy Tanora : vaomiera mpanetsiketsika , mpanomana sy mpanentana ny korana, fitsangatsanganana na lanonana karakarain’ny MKMB. Vaomiera ivondronan’ny tanora MKMB ihany koa. Ny vaomiera “fanentanana sy tanora” no miahy ny Amboarampeon’ny (antoko Mpihira) MKMB.
Mpitoriteny : Vaomiera ivondronan’ny mpitoriteny laika (voamarin’ny komity) ato amin’ny MKMB. Ny mpitoriteny na mpitandrina nohafarana amin’ny fanompoampivavahana iandraiketan’ny MKMB dia tolorana “vatsy” 50 (cinquante) Euros ankoatry ny sarandalany (train , TGV, Métro ,Bus na solon-dasantsy) ka misy fanamarinana . Raha tahiny misy mpitandrina sendra mandalo na mpitandrina iray na maromaro miaraka amin’ilay nasaina ka mandray anjara amin’ny asa fanompoana dia omena “fanomezana” (valopy) 20 (vingt) Euros avy saingy tsy mahazo saran-dalana.
Ny sampana MPIARA-MIVAVAKA KRISTIANA MALAGASY ETO BENELUX (M.K.M.B.) dia mijoro sy miray amin’ny EGLISE PROTESTANTE DE BRUXELLES-BOTANIQUE (E.P.U.B.), ary Masoivohon’ny Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM). Mba handrindra sy hanentana ny asan’ity sampana ity dia natsangana ny "KOMITY". ANDRAIKINY • misolo-tena ny M.K.M.B ,izay eo ambany fitarihan’ny mpandrindra ,eo amin’ny lafiny ofisialy ara-panjakana na ara-piangonana. • mitondra am-bavaka mandrakariva ny M.K.M.B • mpihevi-draharaha sy mpamolavola tetik’asa ho entina eo amin’ny fivoriambe • mpanentana ny mpiara-mivavaka amin’ny lafiny telo : ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana • mandinika ary mandray fanapahan-kevitra amin’ny asa tohavina mandritra ny taona , rehefa nahazoana fankatoavana avy amin’ny Fivoriambe. • miantso ny fivoriambe • mamolavola ny teti-bola isan-taona • miandraikitra ny fanatanterahana ny teti-bola • manao tatitry ny toe-bola indroa isan-taona • mandray fanapahan-kevitra raha misy hamehana amin’ny raharaha • mandinika sy mihaino ny tatitry ny vaomiera tsirairay ary mampita izany amin’ny fivoriambe. .Tompon’andraikitra voalohany amin’ny fampandehanan-draharaha rehetra ato amin’ny MKMB . . Tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanatontosana ny fanompoampivavahana rehetra karakarain’ny MKMB. .Tompon’andraikitra amin’ny fakana mpitandrina hitondra ny fanompoampivavahana eto amin’ny MKMB.
NY AO ANATINY
Kristiana ara-pitaizana, voafidin’ny fivoriambe mpikambana mahefa, ary mpandray Fanasan’ny Tompo. NY ISANY Telo farafahakeliny ary ny fivoriambe no mamaritra ny farafahabetsany.
FOMBA FIFIDIANANA NY KOMITY.
Olona hofidina : manolo-tena na natolotra ka mpikambana mahefa (membres votants).
Latsa-bato miafina na tsanga-tànana no hanatanterahana ny fifidianana araka ny safidin’ny besinimaro eo amin’ny fivoriambe.
Ny mpikambana mahefa no hany mahazo mandray anjara amin’ny fifidianana ka voasoratra anarana amin’ny boky firaiketana.
Roa volana mialoha ny fifidianana no ampandrenesana ny besinimaro . Kendrena mba ho eo amin’ny fiandohan’ny taona (jan/fév) no hanaovana ny fifidianana. Raha toa ka mihoatra ny isa voafetra ny isan’ireo hofidina dia izay mahazo vato ambony no voafidy. Azo atao tsara ny milatsaka ho fidina raha tsy afaka amin’ny andro ifidianana ary atao an-tsoratra izany ka omeny ny mpandrindra am-perin’asa. Na koa manome hafatra am-bava amin’ny mpandrindra am-perin’asa sy komity roa am-perin’asa. Manendry olona efatra ny fivoriambe hanatanteraka sy handrindra ny fifidianana : •Mpitarika 1 •Mpitantsoratra 1 • Mpanampy sy mpanisa vato 2. Ny mpandrindra am-perin’asa no mitarika ny fivoriambe alohan’ny fifidianana ireo olona ireo, alohan’ny fanendrena ireto olona voalaza eto ambony ireto. Tapitra ny andraikitr’ireo olona voatendry ireo rehefa mifarana ny fivoriambe ary ny tatitra dia omeny ny mpandrindra teo aloha. ka ity farany no manolotra amin’ny mpandrindra sy mpitantsoratra voafidy vaovao.
TOROMARIKA AMIN’NY FITARIHANA NY FIFIDIANANA KOMITY AMIN’NY FIVORIAMBE MKMB (ho an’ireo olona efatra voafidy hitantana sy handrindra ny fifidianana) :
1-Fampatsiahivana ny fitsipika anatiny : ny hany mahazo mandray anjara amin’ny fifidianana .
2-Asaina mananga-tanana izay mpikambana mahefa rehetra ary omena ny taratasy misy ny lisitry ny mpikambana Mahefa .Hita amin’izay ny isan’ny mpifidy , izay raiketin’ny mpitantsoratry ny fotoam-pifidianana .
3-Anontaniana ny mpikambana mahefa (membres votants) amin’ny isan’ny komity hofidiana .
4- Rehefa azo ny isan’ny komity hofidiana dia anontaniana ny mpifidy (mpikambana mahefa)sao misy manolotra olona hofidiana . Anontaniana ihany koa sao nisy nametraka hafatra ka manaiky hofidiana nefa tsy afaka manatrika ny fivoriambe. Anontaniana raha naharay taratasy filatsahana hofidiana ny mpandrindra teo aloha.
5- Anontaniana ihany koa sao misy mpikambana mahefa (membres votants) tsy te hofidiana ho komity . Raha misy izany dia ampatsiahivina ny mpivory mba tsy hifidy ny olona nangataka tsy hofidina.
6-Anontaniana ny mpikambana tonga raha hatao latsa-bato miafina na tsanga-tanana . Raha ny voalohany no lany dia ampiasaina ny lisitra efa nozaraina ary hazavaina ny fomba atao : asiana marika mifanandrify amin’ny anaran’olona fidinao, arakaraka ny isa ilaina - Raha folo no ilaina , ohatra ,dia manisy marika amin’ny anaran’olona folo fidinao ka nanaiky hofidina. Raha tsanga-tanana dia fidina ireo naroson’ny fivoriambe hofidina ; arakaraky ny isa neken’ny mpikambana mahefa (votants) tonga.
7- Izay mahazo isa ambony no lany . Ohatra : raha folo ny komity hofidina dia izay folo voalohany no lany . Ny mpanisa vato neken’ny fivoriambe no hany mahazo manisa ny vato ( na latsa-bato miafina izany na tsanga-tanana).
8- Omena ny fivoriambe avy hatrany ny vokatry ny fifidianana . Marihina tsara fa tsy misy isa tratrarina amin’ny fivoriambe (présence).
9- Omen’ny mpitantsoratry ny komitin’ny fifidianana ny mpandrindra teo aloha ny tatitry ny fivoriambe ary ity farany no manolotra izany amin’ny mpitantsoratra vaovao lanin’ny fivorian’ny komity vaovao amin’ny fivoriany voalohany
Mety ho tsy arakaraky ny filaharana voalaza etsy ambony no arahina fa arakaraky ny fanapahankevitry ny fivoriambe . Ohatra : raha mangataka ny famerenana ireo komity teo aloha ny mpivory ka manaiky ireo komity teo aloha dia tanterahina ny fifidianana (saingy angatahina hatrany ny mpivory na miafina na tsanga-tanana no anaovana ny fifidianana). Fenoina raha tsy ampy ny isa tratrarina ka alaina( na atolotra )amin’ireo mpikambana mahefa tonga mivory .
.Tsanga-tanana hatrany no atao amin’ireo « Fanontaniana » ny mpivory tonga (mpikambana mahefa).
Roa taona no faharetan’ny mambra ao amin’ny komity voafidy Azo atao tsara ny mifidy indray ny mambra teo aloha amin’ny fifidianana manaraka raha mbola manaiky ny hilatsaka izy Azo atao ny manao fanavaozana am-panahy raha toa misy toerana banga noho ny : •mambra nametra-pialana • mambra nody an-tanindrazana na nifindra firenena • na mambra nody mandry. Izay voafidy amin’izany dia miasa mandra-pahatongan’ny fahataperan’ny fetran’ilay nosoloiny (mandat). Kendrena ho amin’ny volana jan/fév no hanaovana ny fanavaozana am-pahany ary lazaina roa volana mialoha ny besinimaro.
Teny ierana no andinihana sy andraisana fanapahan-kevitra ato amin’ny komity.
Ny hevitra tapaka rehetra avoakan’ny fivorian’ny komity dia tohan’ny mpikambana ao amin’ny komity rehetra rehefa aseho sy andraisana fanapahankevitra eo antrehan’ny fivoriambe.
Raha misy raharaha maika ilana fanapahan-kevitra dia misy fangatahan-kevitra mialoha amin’ireo mambra tratra antso ary hanaovana tatitra amin’ny fivorian’ny komity manaraka
•mpandrindra 1 •mpandrindra mpanampy 1 na 2 •mpitantsoratra 1 na 2 •mpitahiry vola 1 •mpanolotsaina sy/na tompon’andraikitra ny vaomiera arakaraky ny voamiera mitsangana.
NY MPANDRINDRA • mandrindra sy mandamina ny raharaha amin’ny an-kapobeny • misolo-tena mivantana ny M.K.M.B. amin’ny fomba ofisialy eo anatrehan’ny Eglise du Botanique sy ny hafa ary eo anatrehan’ny Masoivohon’ny Firenena Malagasy • mampiantso sy mitarika ny fivoriambe ary ny fivorian’ny komity • mitarika ny fivoriambe • mitarika ny fivorian’ny komity.
MPANDRINDRA MPANAMPY • misolo toerana ary mandray ny andraikitry ny mpandrindra raha tsy eo izy • manampy ny mpandrindra amin’ny ankapobeny • mandray ny toeran’ny mpitantsoratra raha tsy eo izy • misolo toerana ny mpitahiry vola koa raha tsy eo izy.
MPITANTSORATRA •mpitantsoratry ny fivorian’ny komity sy ny fivoriambe •mitana ny boky rehetra momba ny M.K.M.B •mandefa ny fiantsoana sy ny filazana rehetra •mitahiry ny antonta taratasy rehetra •mitana ny fitomboky ny M.K.M.B.
MPITAHIRY VOLA •mitana ny bokim-bola sy ny antonta taratasy rehetra momba izany •mitahiry ny volan’ny M.K.M.B. •manao tatitra amin’ny besinimaro amin’ny fivoriambe. Momba ny fanisana (vokatra - rakitra ...) dia andraikitry ny komity ankoatry ny mpandrindra sy ny mpitahiry vola. Olona roa (2) ao amin’ny komity farafaharatsiny no manao izay andraikitra izany. Raha misy tsy fahafahan’ny komity dia azo ato ny miantso ny mpandinim-bola hantanteraka izany asa izany.
MPIANDRAIKITRA VAOMIERA •mitarika sy manentana ny vaomiera •tompon’andraikitra eo anatrehan’ny fivorian’ny komity amin’ny asan’ny vaomiera iandraiketany.
FOMBA FIFIDIANANA NY BIRAON’NY KOMITY
Ny zokiny indrindra sy ny zandriny indrindra amin’ny komity tonga no manatontosa ny fifidianana (fitarihana, fandraisana an-tsoratra, fanisana,...) mandra-pitsangan’ny birao. Ny komity tonga no hany mandray anjara sy azo fidina. Tsy misy fandraisana anjara soloin’olon-kafa (vote par procuration). Raha misy fanoloran-tena vita an-tsoratra dia ekena ny fifidianana ilay olona tsy tonga. Latsa-bato miafina no fomba fifidianana tompon’andraikitra ao amin’ny komity : mpandrindra, mpandrindra mpanampy, mpitarika vaomiera... Azo atao tsara ny manova izany raha eken’ny antsasa-manilan’ny mpivory manatrika (50% + 1) (tsangan-tànana). Lany amin’ny toerana ifidianana azy ny komity iray raha mahazo antsasa-manilan’ny mpivory (50% + 1) farafaha-keliny. Raha tsy tratra io isa io (50% + 1) amin’ny fiodinana voalohany dia izay mahazo vato be indrindra amin’ny fiodinana faharoa no lany. Marihina tsara fa ny Mpandrindra teo aloha no mampiantso ny fivorian’ny komity vaovao anatanterahina ny fifidianana birao , fivoriana tanterahina iray aorian’ny fivoriambe ary lazaina mandritra ny fivoriambe ny daty sy ora ivorian’ny komity voafidy ka ny fandaharana voalohany dia ny fananganana ny biraon’ny komity.
• Ny komity no tompon’andraikitra voalohany amin’ny famoaham-bola • Ny mpitahiry vola kosa no mitantana ny vola mivoaka sy miditra . Indroa isan-taona (janoary sy septambra) no dinihin’ny mpandinibola ny bokim-bolan’ny MKMB ary anaovany tatitra izany amin’ny fivoriambe ara-dàlana (matetika volana febroary sy oktobra na Novambra).
Isam-bolana no fivorian’ny komity ara-dalàna.
Ao amin’ny Fiangonana Botanique no toerana ivoriana ary ny Asabotsy voalohany na faharoan’ny volana ; amin’ny telo ora hariva hatramin’ny enina ora sy sasany hariva. Azo ovana ny toerana sy ny andro ary ny ora raha hitan’ny komity ny maha-mety izany.
Azo atomboka ny fivoriana ary manan-kery rehefa feno ny antsasa-manilan’ny komity (50% - 1) miampy ny komity miera.
Tapa-bolana mialoha no andefasana ny fiantsoana ary lazaina amin’ny raharaham-piangonana. •Fivoriana tsy ara-potoana
Azon’ny mpandrindra atao ny mampiantso fivoriana tsy ara-potoana raha misy hamehana ka izay tratra antso no mandray anjara amin’izany .
Mahazo mampiantso fivoriana tsy ara-potoana koa ny mambra amin’ny komity raha mangataka izany ny 1/3 ny mambra voafidy.Efatra andro mialohan’ny fivoriana no andefasana ny fiantsoana.Tsy maintsy manatrika ny atsasaky ny komity vao manan-kery ny fivoriana. •Raharaha maika Azon’ny mpandrindra atao ny mampiantso ny mpandrindra mpanampy, mpitantsoratra, mpitahiry vola ary izay komity tratra antso raha misy raharaha maika . Tsy maintsy anaovana tatitra amin’ny fivoriana manaraka sy ny fivoriambe anefa izany. •Tsy fahafahana
An-tsoratra na hafatra am-bava no anaovana ny fialan-tsiny ary avantana amin’ny mpitantsoratra na mpandrindra izany. Raha misy mpikambana amina komity (mambra) tsy tonga indroa (2) misesy amin’ny fivoriana ara-dalàna ary tsy nahazoana fialantsiny na fierana dia tsidihin’ny solontenan’ny komity roa (2). Raha toa ka mbola tsy tonga ihany (aorian’ny famangiana voalaza etsy ambony) izy amin’ny fivoriana ara-dalàna manaraka ary tsy mbola nahazoana fialan-tsiny ihany dia heverina ho toy ny nanala tena ka azon’ny fivoriambe soloina soloina. Ankoatry ny volaza etsy ambony ,ny fialana tsy ho mpikambana komity ( mambra ny komity ) dia atao an-tsoratra ary tsy maintsy avantana amin’ny mpandrindra.
Ny fivoriambe no mifidy ny mpandinibola, isaky ny roa taona. Olona roa no isan’ny mpandinibola, alaina ao amin’ny mpikambana mahefa , tsy mpikambana ao amin’ny (mambra) komity . Andraikiny : mandinika ny atontan-taratasy mikasika ny famoahana sy fidiran’ny vola ato amin’ny MKMB . Mandinika ny bokimbola. Ary manao tatitra amin’ny fivorian’ny komity sy ny fivoriambe. Manome “quitus” ny mpitahirivola .
Ity sata mifehy ny MKMB ity dia azo ovàna na ahitsy. Entina eo amin’ny fivorian’ny komity ny fanovàna na fanitsiana tiana atao . Hany mahazo mitondra izay fanovàna na fanitsiana tiana atao dia ny mpikambana mahefa (afaka mifidy amin’ny fivoriambe). Dinihin’ny komity izany fanovàna tiana atao izany ary raha hitany ny maha mety azy dia entiny eo amin’ny fivoriamben’ny MKMB ary ity farany no mandray fanapahan-kevitra farany . Atao ny fanovàna na fanitsiana rehefa lanin’ny atsasa-manilan’ny mpikambana mahefa tonga amin’ny fivoriambe.
Sata na fitsipipitondrana mifehy ny MKMB , neken’ny fivoriambe anio faha 24 Novambra 1991.
Fanitsiana farany : Alahady 31 Oktobra 2004 .
Fanitsiana farany nataon’ny komity ary hatolotra holanian’ny fivoriambe(volana Oktobra na Novambra 2013) : 25 Aogositra 2013 sy 14 Septambra 2013.
Lanin’ny fivoriambe androany Alahady 27 Oktobra 2013 ary mihatra avy hatrany .
Fanitsiana farany : Alahady 22 febroary 2015 (toromarika hoa n’ireo handrindra sy hitantana ny fifidianana komity mandritra ny fivoriambe MKMB : lany tamin’ny isa 30/30).
Fanitsiana ny andininy faha-11 : fanitsiana natolotry ny komity ary neken’ny fivoriambe androany Alahady faha 26.3.17. Mpikambana Mahefa : 31 (iraika amby telopolo) . Eny : 31. Tsia : 0 . tsy nanan-kevitra : O .
Vendredi 3 Avril 2020 - 2:35:14